Xuquuqda iyo waajibaadka hoygaaga | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / Daganaanshaha dalka Iswiidahn / Xuquuqda iyo waajibaadka hoygaaga
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 13 9 2021
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay xuquuqaha iyo waajibaadka marka aad kireysato ama mulkiile ka tahay hoy. Waa inaad marwalba amaan ku dareento hoygaaga. Sidaas darteed ayay u jiraan xuquuqo iyo waajibaadyo labadaba kuwaas oo la xiriira hoygaaga. Xuquuqahan iyo waajibaadyadan way kala duwanaan karaan taas oo ku xiran haddii aad kireysatay ama aad mulkiile ka tahay hoygaaga.
Waxaad akhrin doontaa waxyaabo ay ka mid tahay heshiis kiro iyo waxa dhaca haddii wax ka jabaan gudaha gurigaaga. Waxaad xitaa akhrin doontaa wax ku saabsan caymiska guriga iyo kaalmada kirada.
Xaqa loo leeyahay hoy
Dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin hoy. In adigu aad xaq u leedahay hoy micnaheedu waa in aad raadsan karto caawimaad in aad hesho nooc hoy haddii aanad haysan meel aad ku noolaato. Degmada ayaa mas’uuliyad ka saarantahay in jiraan hoy’yo loogu talogalay degmada dadka ku nool.
Waxaad xitaa xaq u leedahay inaad guurto oo doorato meesha ah gudaha Iswiidhan ee aad ku noolaanayso.
​Qofka kasta xaq waxuu u leeyahay guri
Iswiidhan Qofka kasta xaq waxuu u leeyahay guri. Waa mamnuuc midabtakoorka dhinaca guri raadiska sababna looga dhigo:
qofka meesha uu kasoo jeedo
diinta uu leeyahay
lab ama dhedig qofka kuu yahay
Haddii aad dareemayso in lagu takooray waxaad la xiriiri kartaa xafiis ah ka hortaga takooridda si aad u hesho talo iyo taageero. Degmooyin badan waxa kale oo ka jira qayb talobixinta macmiilka ah oo degmadu leedahay oo aad la xiriir karto si aad u hesho taageero.
Heshiis kiro waa xaq aad yeelatay marka aad kireysato hoy. Heshiiskan waxaa ku qoran waxa ku jira kirada, inta ay leegtahay muddada laguu oggolyahay inaad ku noolaato hoygan iyo inta uu yahay dhererka wakhtiga la isa siinayo marka heshiiska laga baxayo. Heshiiskan waxa kale oo ku qoran waajibaadkaaga guri kireyste ahaan. Tusaale ahaan wakhtiga aad bixinayso kirada iyo in aad daryeesho hoygan. Haddii aad kireysatay ama mulkiile ka tahay guri waxaa badanaaba jira qawaaniinta wanaaga kuwaas oo dhammaan dadka halkaas ku nool ay tahay inay ku dhaqmaan.
Heshiiska kirada maaha inuu lahaado wax kharash lacag ah
Ma la oggola in guri kireeyayaasha ama guri kireystayaasha ay lacag ku qaataan ama iibiyaan heshiis kiro. Heshiis kiro oo lacag lagu iibiyo ama lagu iibsado waxaa badanaaba lagu magacaabaa heshiis suuqa madow ah. Qofka doonaya inaad lacag ka bixiso heshiis kiro wuxuu galay dembi oo waxaa lagu arrintaas loogu xukumi karaa xabsi.
Adigaaga iibsanaya heshiis kiro ee lacag ka bixinaya adna waxaad galaysaa khatar weyn. Haddii guri kireeyuhu oggaado in aad suuq madow ku iibsatay heshiiskan waxaa aad waayi kartaa heshiiskan.
Guri kireystaha xaq wuu u leeyahay inuu heshiiska guri kireynta ka baxo
Adigaaga ah guri kireyste waxaad mar kastaba xaq u leedahay inaad ka baxdo heshiiska kirada haddii aad doonaysid inaad guurto. Ka dib markaad heshiiskan ka baxdo waxaad u baahan kartaa inaad sii wado bixinta kirada gurigan xilli wakhti go'an ah. Tani waxaa lagu magacaabaa wakhtiga heshiis ka bixida. Wakhtiga heshiis ka bixida badanaaba waa saddex bilood haddii wax kale aanay ku qornayn heshiiskan. Wakhtiga heshiis ka bixidu wuxuu bilaabmaa bisha ka dambeysa markaad adigu ka baxday heshiiskaaga kiro.
Guri laga kireeystaha xaq wuu u leeyahay inuu heshiiska guri kireynta ka baxo
Guri laga kireeystaha xaq wuu u leeyahay mararka qaar inuu heshiiska guri kireynta ka baxo. Taasina waxeey dhici kartaa haddii:
in ka badan hal toddobaad la habsaamay bixinta lacagta kirada
ka kireynta ama ku wareejinta gurigan ee qof kale iyadoo aan oggolaansho laga haysan mulkiilaha guriga
u isticmaalka gurigan wax kale oo aan ahayn in lagu noolaado, tusaale ahaan hawlo dembi leh ama in shirkad weyn laga socodsiiyo gurigan.
ayaa mas'uul ka ah in xasharaad soo galeen dhismahan ama ka aamusay in la soo sheego in xasharaad ka dilaacay halkan.
diiday in mulkiilaha guriga loo oggolaado soo gelida gurigan, iyadoo aan la haysan sabab fiican oo ah in mulkiilaha guriga loogu diido soo gelid, tusaale ahaan xilliga dayactirka.
si xun u dayacay gurigan
aan ka soo bixin wixi ku qornaa heshiiska kirada
Haddii wax ka jabaan guriga
Markeey guriga wax ka jabaan waxaa hagaajinaya shirkadda guriga iska leh. Guri kireystaha uma baahna inuu lacag bixiyo hadeey tusaale ahaan jabaan filinjeerka ama jikada cuntada lagu kariyo. Laakiin hadaad adiga sababtay dhaawaca adigaa bixinaya lacagta. Shirkada guriga iska leh ayaa kontorooleysa guriga inta aadan soo degin. Saas waxaa loo sameeyaa si aadan ubixin wax uu jabiyay guri kireysitihii kaa horeeyay adiga.
Haddii aad deggantahay aad badh iibsatay waa in adigu laf ahaantaada aad daryeesho dayactirka guriga. Haddii dabshidka wax lagu karsado, qaboojiyaha ama wax kale jabaan aad adiga laf ahaantaada bixiso lacagta.
Waa maxay micnaha "dayaca hoyga"?
Maxa bixin kartaa tusaale ah waxa ay tahay in qofku daryeelo gudaha gurigiisa?
Guri lagu haboonaysiiyay dadka awoodda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay
Haddii adiga ama qof ka mid ah qoyskaaga leeyahay hoos u dhac awoodda laxaadka ah waxaa jira qaabab kala duwan oo ah hoyga la waafajiyay oo laga codsan karo degmadaada. Waxa ahaan kartaa tusaale ahaan micnaheedu in aad hesho caawimaadda in gurigaaga lagu haboonaysiiyo baahiyahaaga.
Haddii aad u baahantahay caawimaad dheeraad ah waxaad codsan kartaa inaad ku noolaato hoy kugu haboon halkaas oo qofku shaqaale ka helayo caawimaad iyo taageero.
Haddii aad guri gacan koobaad ah heeysato waxaad xaq u lee dahay in aad badalato guri haddii aad lee jirto sabab la ogalyahay. Sababooyinka la ogalyahay waxaa ka mid ah in aad u baahantahay guri si weeyn, guri ka kiro yar ama guri u si dhow goobta shaqada. Haddii aad dooneeyso in aad badalatid guriga waa in marka hore ee ogalataa shirkada guriga kireneeyso. Haddii aad guriga badalato adigoo laguu ogalaan, waxaa burburi karo heshiishka gacan koobaadka oo guriga sidaas lagaaga soo celiyo. Haddii aad tahay guri kireeyste waxaad xaq uuu lee dahay in aad guriga badalato isla marka aad hesho heshiishka gacan koobaadka.
Ururka guri kireystayaasha
Ururka guri kireystayaasha waa urur xubno looguna talogalay guri kireystayaasha gudaha Iswiidhan. Mid ka mid ah hawlahooda ugu muhiimsan waa in laga wada xaajoodo kirada dhanka xubnahooda. Hadafkoodu waa in kirooyinku aanay kordhin si dheeraad ah marka la barbardhigo qiimayaasha kale ee gudaha bulshada iyo in laga hortago kor u qaadida korooyin aan macquul ahayn. Ururka guri kireystayaasha waxa kale oo ay bixin karaan taageero sharciyan ah xilliga is qabsiyo oo ka jawaabi karaan su'aalaha ku saabsan xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga guri kireyste ahaan. Iyagu waxay tusaale ahaan bixin karaan talo iyo taageero haddii aad leedahay dad jaar ah oo dhib leh, ama haddii adiga iyo guri kireeyahaagu aanaydin heshiis ku ahayn kirada.
Guddiga dhexdhaadinta kirada guriyaha
Guddiga dhexdhaadinta kirada guriyaha waa qaab maxkamadeed loogu tala galay haddii uu dagaal ka dhex dhaco guri kireeystaha iyo guri kireeyaha. Iswiidhan waxaa ku taalo sideed xarumo ee lee dahay guddiga dhexdhaadinta kirada guriyaha. Waxeey ku yaaliin Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall iyo Umeå. Guddiga dhexdhaadinta kirada guriyaha waxuu go'aan ka gaaraa waxa aan heshiis lagu aheeyn, tusaale ahaan haddii qof guri kireeyste ah uu guriga uu kireeyo gacan labaad ahaan. Haddii aad caawinaad uu baahan tahay guddiga dhexdhaadinta kirada guriyaha ka waxuu ka jawaabi karaa su'aalo ku saabsan sharciyada jiro.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Guddida kirooyinka kuna qoran bogga intarnatka ee Guddida kirooyinka.
Waajibaadka haddii aad mulkiile ka tahay guri aad bar iibsatay
Adigaaga mulkiile ka ah guri aad bar iibsatay waxa aad xitaa xubin ka tahay ururka guryaha la bar iibsaday. Dhammaan xubnaha waxaa waajib ka saaranyahay ururka guryaha la bar iibsaday. Adigu waa inaad tusaale ahaan kharash lacag ah siisaa ururkan bil kastaba oo ma lagaa oggola inaad dayacdo hoygan. Haddii qofku aanu raacin waajibaadkiisa waxaa haddii xaaladu xumaato qofku uu waayi karaa xaquu u lahaa hoygan. Markaasi wuxuu qofku ku khasbanyahay inuu iibiyo. Hase ahaatee tani waa mid aan aad iyo aad u caadi ahayn.
Waa muhiim in aad lee dahay ceeymis guri sababto waxaad ku siinaa ceeymiska ilaalin-asaasi. Waxaa jiro shirkadooyin badan oo iibiyo ceeymis guri. Marka aad ooneeyso ceymis waa in aad si gaar ah isku bardhigtaa oo doorataa shrikada kuu haboon . Caymiska gurigu wuxuu lacag ka siinayaa haddii alaab lagaa xado ama kharibmaan, sida daadad ama dab. Caymiska gurigu wuxuu kuu ilaalinaa dhamaan alaabta ku taal guriga. Wuxuu kaloo ilaaliyaa dhamaan dadka ku qoran warqadda caymiska oo deggan guriga. Haddii aad lee dahay gurigaada waxaa ceeymiska guriga ku dhameeystiri kartaa ceeymiska guri is-kaashada ama ceeymiska filada.
Haddii dakhligaadu yaryahay oo aadna Iswiidhan ku diiwangalsantahay waxaad xaq uu lahaan kartaa in aad caawinaad kirada uga hesho Hey'adda qasnada ceeymiska. Waxaa loo yaqaan kaalmada kabida iijaarka. Qofka carruur leh wuxuu xaq ku leeyahay in uu Lacagta kabida iijaarka codsado. Haddii aad heli karto kaalmo iyo inta aad heli karto waxeey ku xirantahay inta qof ee reerkaada ka kooban yihiin. Waxeey kale oo ku xiran tahay heerka iijarka iyo inta lacag ee in soo gasho. Sido kale qofka uu dhaxeeyo 18 iyo 28 sano waxuu xaq uu yeelan karaa kaalmada kabida iijaarka.
In lagu noolaado meel u dhow dad kale
Dhinaca guri dabaq ah oo reero badan degganyihiin waxaad ku nooshahay oo u dhowdahay deriskaaga. Tani micnaheedu waa in aad ku khasbantahay inaad tixgelin muujiso oo dulqaad u lahaato dadka kale qaabka ay u noolyihiin. Dhammaan guri kireystayaasha ku jira guri kiro ah waxaa mas´uuliyad wadajir ahi ka saarantahay meelaha dadka oo dhan isticmaalaan, tusaale ahaan jaranjarada, qolka qasaaladda iyo aaga ku hareersan gurigan.
Waa maxay micnaha in "tixgelin la muujiyo oo dulqaad loo lahaado dadka kale qaabka ay u noolyihiin"?
Miyaad garanaysaa nooca ay yihiin qawaaniinta wanaag ku dhaqmidda ee khuseeya meesha adigu aad ku deggantahay?
Waa kuwee xuquuqda iyo waajibaadka ugu muhiimsan marka adigu aad kireysato hoy?